आँखा फर्फराउनु तपाईको लागि शुभ कि अशुभ? जानिराखौ • raradiodarpan.com
अङ्ग ज्योतिषको अनुसार हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग फर्फराउनुको कुनै न कुनै अर्थ हुन्छ। यहाँसम्म कि आगामी घटनाहरूको बारेमा पनि यिनीहरुले जानकारी दिन्छ। त्यस्तै गरी, हाम्रो आँखा फर्फराउनुको पनि शुभ र अशुभ अर्थ छ। जब हाम्रो आँखा फर्फराउन सुरु हुन्छ तब हामी तुरुन्तै महसूस गर्छौ र सोच्न थाल्छौ मेरो साथ शुभ हुन्छ वा अशुभ । जान्नुहोस् कुन आँखा फर्फराउनु शुभ हो र कुनको होइन?
धर्मशास्त्रमा, शरीरको अङ्ग फर्फराउनु शुभ मानिन्छ वा अशुभ:
धर्मशास्त्रमा विश्वास गरिएको छ कि जब हाम्रो साथमा केहि राम्रो वा नराम्रो हुन गइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो शरीरको अङ्ग फर्फराएपछि पनि थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रो शरीरको अङ्गले राम्रोसँग यस बारेमा संकेत गर्दछ, तर वास्तवमा यी चीजहरू शुभ-अशुभसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्छन्।
दाइने आँखा फर्फराउनु: समुद्र शास्त्रको अनुसार दायाँ आँखा फर्फराउनु पुरुषहरूको लागि शुभ मानिन्छ। यदि एक महिलाको दायाँ आँखा फर्फराउछ भने यो अशुभ मानिन्छ। त्यसो भए यदि अर्को पटक यो तपाईको साथ हुन्छ भने यो कुरा ध्यान गर्नुहोस्।
देब्रे आँखा फर्फराउनु: यदि स्त्रीको बायाँ आँखाको पिक्सेल र भौहरू फर्फराउछ भने उनीहरुका लागि यो शुभ मानिन्छ । तर पुरुषहरूको लागि यो अवस्था अवश्य उल्टो हुन्छ। पुरुषहरुको कुनै पुरानो दुश्मनसँग झगडा हुनसक्छ वा कोहीसंग दुश्मनी बढ्न सक्छ। यसकारण सावधान रहनुहोस्।
दाँया आँखाको पिक्सेल र आखि भौ फर्फराउनु: पुरुषहरूको दाहिने आँखाको माथिल्लो पिक्सेल र भौ फर्फराउछ भने, उनीहरुको मनको सबै चाहनाहरू पूरा हुन्छन् र पदोन्नति र धन लाभ हुन्छ। तर यदि महिलाहरुको दायाँ आँखाको माथिल्लो पिक्सेल र भौ फर्फराउछ भने उनीहरुका लागि अशुभ मानिन्छ र सबै काम बिग्रने हुन्छ।